Ikhaya elihle elihlaziyiweyo iFundy Bay
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uSusan iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ikhaya lethu elinamabali amabini amahle limnandi kwaye limnandi. Ibekwe ngamanyathelo nje ukusuka kwindawo entle yeFundy eqhayisa ngamaza aphakamileyo emhlabeni. Ikhaya alinamsi linembono evulekileyo evulekileyo enazo zonke izinto eziluncedo zekhaya.
Indawo ivulekile, icocekile kwaye inomoya, indawo entle yeholide yosapho, abahambi beshishini, okanye abazali abafuna nje ukubaleka ebantwaneni. Uluntu lunobuqhetseba, abantu basekuhlaleni abanobuhlobo kakhulu apho ukuloba kungumsebenzi wemihla ngemihla nokuba kungomsebenzi okanye ukuzonwabisa.
Ngenxa yokuba sikude nolwandle, unokuhamba ujikeleze ubumelwane, wonwabele abantu basekuhlaleni abanobuhlobo, ube nomlilo webhombu elunxwemeni, ukhwele ibhayisekile usiya kwilighthouse eGreens Point, uzimase uMnyhadala weBlueberry kunye neekonsathi zangaphandle ngexesha lonyaka. Jonga ividiyo ye-Bay ye-Fundy kwi-Vimeo kwaye ukhangele i-Bay ye-Fundy iqala Apha, umboniso omkhulu wendawo yethu! Simalunga nemizuzu engama-30 ukusuka eSt. Andrews, N.B. esandula ukuvotelwa "Eyona ndawo yokuFikela eCanada"
Iphuma kwiphephandaba lasekuhlaleni:
ISaint Andrews, N.B., yamkelwa lijelo leendaba laseMelika njengeyona ndawo ilungileyo yokutyelela eCanada.
“Sasingaye, ukuba yayingengowona mncinci, lolona luntu luncinci lukhethelwe ishumi eliphambili,” utshilo uSodolophu uDoug Naish kwiShift NB.
"Ke, besisele sijongana noko kungalunganga, kodwa kwafumaniseka ukuba ayisiyongxaki."
ISaint Andrews yabona unyaka werekhodi kukhenketho, utshilo usodolophu
Ababhali bohambo be-USA Today Best Destination in Canada confictions ukhethe iindawo eziphezulu-10 kwaye uluntu lwabotela abaluthandayo, ucacise watsho uNaish.
“IsiXeko saseQuebec kusenokwenzeka ukuba singoyena mntu ukhuphisana naye kulo lonke ukhuphiswano,” utshilo.
Idolophu enkulu yaseQuebec yagqitywa kwindawo eyoond. Olunye uluntu olugqibe kwi-10 ephezulu yayiyiLunenburg, N.S., Saskatoon neMontreal.
UNaish ubange uluntu ngokuvota kolu khuphiswano, kodwa wakhuthaza nabanye ukuba bavotele iSaint Andrews.
Kutshanje abahlali baye bafumanisa ngoloyiso lokhuphiswano ebudeni bomsitho wokwenziwa kweeplanga zesona sitrato sikhulu ekuhlaleni.
Ngenxa yokuba i-USA Today inabafundi abaninzi, uNaish uthe ukubizwa kweyona ndawo ingcono yokutyelela kufanele kube nefuthe elihle kuluntu nakummandla.
"Kuya kubakho abantu abaninzi, ngakumbi abantu baseMelika, abanokuthi zange beve ngeSaint Andrews okanye iCharlotte County," utshilo.
"Kwaye ngoku, baya kuva ngayo kuba ikufuphi nekhaya malunga nopapasho abaluqhelileyo."
Nangona ndingeke ndihlasele imfihlo yakho ngexesha lokuhlala kwakho, ndiyafumaneka ukukunceda ngokucebisa ngemisebenzi yasekhaya, iindawo zokutyela kunye nohambo lwemini. Ndihlala nje imizuzu embalwa ukusuka kwipropathi, unokuyibona indlu yam xa ujonge ngaphesheya kwebhayi. Ndiyafumaneka ukukunceda ngayo nayiphi na indlela eya kwenza ukuhlala kwakho ukonwabele ngakumbi.
Nangona ndingeke ndihlasele imfihlo yakho ngexesha lokuhlala kwakho, ndiyafumaneka ukukunceda ngokucebisa ngemisebenzi yasekhaya, iindawo zokutyela kunye nohambo lwemini. Ndihlala…